Clear-Com / FreeSpeak Edge တင်ဆက်မှုသည်နယူးယောက်မြို့၌ NAB Show တွင်ရုံတင်မည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Clear ကို-Com / FreeSpeak Edge တင်ပြ NAB Show ကို New York မြို့မှာပွဲဦးထွက်တော်မူမည်
Show ကိုနယူးယောက် NAB ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကွာဝေးသောနေရာမှ ဖြတ်၍ ဖန်တီးသူများနှင့်ဖျော်ဖြေရေးပညာရှင်များသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာများစွာရှိလိမ့်မည် Clear ကို-Com® ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်ကတင်ဆက်ပေးတယ်။ ဒါအမှန်ပဲ, Clear ကို-Com® ရှိလိမ့်မည် FreeSpeak Edge ™၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်ကဒီအောက်တိုဘာလ 2019 မှာမိတ်ဆက်ပြသ NAB ပြရန် နယူးယောက်။ ဒီအစဉ်, United States မှာ FreeSpeak Edge ရဲ့ပထမဆုံးဆန္ဒပြပွဲဖြစ်လိမ့်မည် Clear ကို-Com တစ်ပြိုင်နက်ယင်း၏အမျိုးမျိုးတင်ဆက် အိုင်ပီ-based ထုတ်ကုန် ထောက်ခံမှုမှအလုပ်လုပ်သောနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ SMPTE 2110-30 ။
FreeSpeak Edge ဆိုတာဘာလဲ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းချက်၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် FreeSpeak မိသားစုမှနောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်သည်အဘယ်အရာခုနှစ်, FreeSpeak Edge ™ ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နိုင်သောအရှုပ်ထွေးဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစွမ်းဆောင်ရည်အချို့ကိုများအတွက်ကြယ်အသံအရည်အသွေးနှင့်မြှင့်တင်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်တတ်၏။ Clear ကို-Com'' s ကိုနောက်ဆုံးပေါ်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်ကပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာရှိသည်ဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီအပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်းညှိနှိုင်းစွမ်းရည်နှင့် system ရဲ့ transceiver နှင့် beltpacks ထဲတွင်နေရာအလိုလိုသိဒီဇိုင်း features တွေအပေါငျးတို့သရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
FreeSpeak Edge ™၏ကနဦး function ကိုအပြည့်အဝကအပြစ်ကင်းစင်စွာစိန်ခေါ်မှုနေရာများနှင့်မြင့်မားသော Multi-လမ်းကြောင်းကို enviroments မှာဖျော်ဖြေဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ 5GHz နည်းပညာ, ၏တနျခိုးဖြည်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်အပြည့်အဝအသုံးချ Clear ကို-Com'' s ကိုထို့နောက်တစ်ဦး interface ကိုကိုယ်ခံစွမ်းအားခိုင်မာတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွှာများကို OFDM နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်ထားတဲ့သီးသန့် RF နည်းပညာ, ။
က FreeSpeak Edge နဲ့ audio စွမ်းရည်၏ကန့်သတ်မှကြွလာသောအခါ, Ultra-အနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်အတူရှင်းလင်း 12kHz အသံအရည်အသွေးကိုကယ်တင်တတ်၏။ ဤသည်အကြီးဆုံးဘဏ်ဍာထားရှိရန် 100 beltpacks နှင့် 64 transceiver ကိုကျော်ကိုထောကျပံ့ဖို့နည်းပညာနှင့် bandwidth ကိုရှိခြင်းအတွက်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်အမြင့်မား၏အရွယ်မှာစေသည်။ ဒါဟာ၎င်း၏ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ခုတည်းပေါင်းစည်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကဖြတ်ပြီးသုံး bandwidth ပေးနိုငျ FreeSpeak IIÒ 1.9GHz နှင့် 2.4GHz စနစ်များကို။
FreeSpeak II ကိုအကြီးစား, ရှုပ်ထွေးသောဒီဇိုင်းများသို့မဟုတ်အထူးပြု application များအတွက်စံပြသောငါးရုပ်သံလိုင်း Full-duplex ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ငါးနှစ်ကြာတဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလ၌, FreeSpeak II ကိုအမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်ဖြတ်ပြီး 1.9GHz နှင့် 2.4GHz တီးဝိုင်းကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစစ်ဆင်ရေးများအတွက်စံသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ FreeSpeak II ကိုဆက်သွယ်ရေး၏လွတ်လပ်သောလိုင်းများအတွက် untethered နှင့်ပြောနေတာဖြစ်အဖွဲ့သည်အဖွဲ့ဝင်လိုအပ်သည်။
အပိုဆောင်း NAB ပြရန် New York Clear ကို-Com အထူးများ
အတူ Clear ကို-Com'' s ကို FreeSpeak Edge Display, NAB ပြရန် နယူးယောက်မြို့ကတခြားတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Clear ကို-Com : ကဲ့သို့သောစနစ်များ
အဆိုပါ Eclipse HX စနစ်က
V-စီးရီး Iris က Panel ကို
အဆိုပါ LQ ™စီးရီး IP ကို ​​Interfaces
HX ဒစ်ဂျစ်တယ် Matrix Eclipse
Clear ကို-Com'' s ကို Eclipse HX ဒစ်ဂျစ်တယ် Matrix အထောက်အကူ SMPTE 2110-30 နှင့် AES67 Third-party အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ။ အဆိုပါ Eclipse HX system ရဲ့ထူးခြားတဲ့အိုင်ပီ toolset ၏ဤစာစောင်ပါဝင်သည်ကြောင်းအစွမ်းထက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေး:
LAN / WAN / အင်တာနက်-based panel ကိုဖြန့်ကျက်
ရိုးရှင်းသော configuration များ
HCI နှင့် Logic-Maestro နှင့်အတူထူးခြားတဲ့အိုင်ပီ-based ကိုထိန်းချုပ်ယန္တရားများ
Third-party ထုတ်ကုန် interface နှင့်မူတည်ပြီးနိုင်စွမ်း
LQ, SIP နှင့်အေးဂျင့်-IC ပေါင်းစည်းမှု
V-စီးရီး Iris က Panel ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် IP ကိုစီးသုံးတစ်ပြိုင်တည်းပါ Full-duplex compressed လုပ်မထားတဲ့အသံကျော်ဆက်သွယ်ရေးပေးပို့သည်။ စနစ်များကိုသိသိသာသာလျှော့ချအောင်းနေချိန်နှင့်အတူအသုံးပြုသူမှအသုံးပြုသူထံမှအရည်အသွေးမြင့်မား, compressed လုပ်မထားတဲ့ AES67 အသံကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအဘို့ဤအင်္ဂါရပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ panel ကိုချိတ်ဆက် Clear ကို-Com'' s ကိုပြုလုပ်ရန် AES67 လိုက်နာ High-သိပ်သည်းဆ E-: IPA ကဒ်။ ဤသည်အသုံးပြုသူများကိုကဒ်နှုန်း 64 Iris ကပြားမှတက်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ V-စီးရီး Iris က panel ကိုအသုံးပြုသူတံဆိပ်, တာလီချိုးနှင့် port ကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုကူညီပေးသောအပြည့်အဝအသုံးပြုသူ-Configure လုပ်လို့ရတဲ့အရောင် OLED display တွေ, ပေးပါသည်။
LQ ™စီးရီး IP ကို ​​Interfaces
LQ ™စီးရီး IP ကို ​​Interfaces အသုံးပြုသူများကိုအားလုံးအသုံးပြုသူ configuration အပေါ်မှာမူတည်ထားတဲ့မျိုးစုံဆက်သွယ်ရေးမှတ်ဖြတ်ပြီးအသံနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုများကိုရွှေ့ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, SIP နှင့်ကွန်ယက်ထိန်းချုပ်ရေးပွဲများ (GPIO), ပေးသနားတော်မူကြောင်းအသံ-over-IP ကို ​​interfaces ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် LQ ™စီးရီး IP ကို ​​Interfaces ပထဝီအနေအထားအရ-လူစုခွဲကြသည်နှင့်မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်နည်းပညာအမျိုးအစားအသံနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများအဖြစ်သူတို့လုံခြုံ LAN, WAN သို့မဟုတ်ပင်အများပြည်သူအင်တာနက်ကျော် networked နိုင်ပါသည်။
သည် Now ကို Register NAB ပြရန် New York
Show ကိုနယူးယောက် NAB မှာအောက်တိုဘာလ 16th-17th အပေါ်ရာအရပ်ကိုကြာမြင့်မည် ယာကုပ်အမျိုးကိုငွေကျပ် Javits ရေးစင်တာ။ မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်, ထို့နောက် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ. Clear ကို-Com'' s ကိုဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်တဲမှာသရုပ်ပြများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် #828 AES 2019 မှာ နှင့် တဲ #N140 at NAB ပြရန် နယူးယောက်။
အပေါ်သိရှိလိုပါက Clear ကို-Com'' s ကိုဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းနည်းများ, ထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး www.clearcom.com.
2014 NAB ပြရန် 2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Clear ကို-Com FreeSpeak Edge FreeSpeak II ကို NAB NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ NAB16 nabshow 2019-10-05
ယခင်: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Jem Schofield
နောက်တစ်ခု: IBC2019 ၏ရောင်ပြန်ဟပ်